Apple dia namoaka fanambarana vaovao efatra an'ny Apple Watch | Vaovao IPhone
Ireo avy ao amin'ny Cupertino dia namoaka fanambarana efatra vaovao ho an'ny Apple Watch, mampiseho ny fahaiza-manaony isan-karazany ho fitaovam-pifandraisana sy fanampiana amin'ny fampiharana fanatanjahantena, ankoatry ny fangatahana antoko fahatelo vaovao. Ireo fanambarana vaovao ireo dia manaraka ny lamina ara-barotra mahazatra izay narahin'i Apple hatramin'ny nanombohany ny Apple Watch. Avy amin'ny iPhone News izahay dia mampiseho aminao ny fanambaràna vaovao hahafahanao manapa-kevitra raha mety aminao ny mividy Apple Watch na tsia.
Ao anatin'ireo doka roa voalohany, antsoina hoe Closer and Goals, manandrana mampiseho ny fomba anampian'ny Apple Watch antsika hifandray amin'ireo havan-tiantsika ary koa hanana fomba fiaina salama kokoa. Amin'ny voalohany dia hitantsika ireo mpihetsiketsika manao antso sy mifehy ny mozika, mampiseho ny famantaranandro ho fitaovana hitazomana ny fifandraisana akaiky amin'ny olon-kafa amin'ny fomba vaovao. Ao amin'ny faharoa, ireo avy any Cupertino dia mamoaka ny fahaiza-manao fampiofanana omen'ny Apple Watch antsika, manomboka amin'ny yoga ka hatramin'ny fampihetseham-batana any an-trano. Ho fanampin'izany, asehon'izy ireo amintsika ny rafitra fanatanterahana fiofanana amin'ny smartwatch.
Tao anatin'ny roa farany, antsoina hoe Beijing sy Berlin, asehoy ny Apple Watch ho mpiara-dia amin'ny dia mahasoa izay mahatonga ny iPhone ho feno kokoa raha azo atao, amin'ny alàlan'ny sarintany sy ireo rindranasa mifanentana samihafa, amin'ny fomba malina sy mifototra. Ireo doka roa ireo dia manandrana mampiseho ny Apple Watch ho toy ny fitaovana kokoa noho ny gadget mampiala voly.
Apple dia tsy isalasalana fa mametraka ny hena rehetra amin'ny fantsona miaraka amin'ny famataranandro, izay mahazo isa be dia be. nyTamin'ny farany dia toa nanao azy ireo indray izy ireo, nandefa vokatra iray na dia teo aza ny fahitana azy teny an-tsena dia tsy malaza, hahatonga azy io ho zava-dehibe eo amin'ny sehatra misy azy. Tsy misy fomba mazava kokoa hanehoana ny fahaizanao mihoatra ny fahitana azy amin'ny asany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » maro » Apple dia namoaka fanambarana Apple Watch vaovao efatra